Mamita-tena mamita ny fe-potoam-piasana… | NewsMada
Mamita-tena mamita ny fe-potoam-piasana…
Mandeha ny raharaham-pirenena, mihazakazaka ny fampandrosoana… Nampitsamboaboatra ny sasany izany talohaloha teo; eny, na eo aza ny fahasahiranam-bahoaka isan’andro vaky: fihanaky ny pesta, tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ady sy fandrobana tany etsy sy eroa…
Tena marina ve izay lazaina? Milaza tena, mandoka tena, manamarin-tena… Eo ny tsirairay mitsara izay tsapany sy iainany any ifotony avy any, raha mba misitraka inona amin’izao. Mila porofo ve fa miharatsy andro aman’alina ny fiainam-bahoaka amin’ireo fahasahiranan-dava voatanisa ireo?
Tsy vitan’izany, potika ny fiainam-pirenena sy ny firenena. Manjakazaka ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano, ny kolikoly… Manginy fotsiny ny tsy fanarahan-dalàna, fa tsy inona izay hoe fanjakana tan-dalàna. Gaboraraka ny harem-pirenena robain’ny vahiny, na an-kibon’ny tany na an-dranomasina.
Inona no hoe mandeha sy mandroso amin’izany? Heverina ho mandeha ny raharaha, rehefa afa-manao izay saim-pantany sy ny danin’ny kibo ireo mpitady sy mpiady tombontsoa, mpiray tsikombakomba, mifampiaro na mifampihoahoala amin’ny fotoan-tsarotra… Tsy misy manohintohina tsinona.
Koa matahotra na leo na manaja tena tsy mihetsika sy mangina ny vahoaka manoloana ny lainga sy tsy fanajana ny teny nomena na fampandriana adrisa efa ho lava, ny fampiasana herim-pamoretana amin’izay mitady hihetsika rehetra, ny fanampenam-bava amin’ny fomba rehetra: vola, lalàna na fonja…
Izany no hoe raharaham-pirenena mandeha, fampandrosoana mihazakazaka be? Mamita-tena mamita ny fe-potoam-piasana sisa. Saingy eo ihany ny tsy fahatokisan-tena, ny hakanosa noho ny tahotra amin’izay hitranga. Ny atao ihany no mahasoa na maharatsy, fa tsy ny filazana tena na ny filazan’ny hafa.
Izany io karazana paipaika sy kajikajy politika rehetra io? Fitsinjovana ny farany tsy maintsy ho tonga, tsy azo ialana. Tena fitsinjovana ny farany tokoa sa izay mbola mahamety ny tena ihany? Tsy adala na zaza ny vahoaka ka ho voafitaka sy ho voafintana amin’izay mamita-tena mamita ny aminy…